किसानलाई कम्युनिष्ट व्यवस्था ल्याउनको लागि प्रयोग गरिन्छ | newsnepali.com
किसानलाई कम्युनिष्ट व्यवस्था ल्याउनको लागि प्रयोग गरिन्छ
Published on: Fri, Nov 17th, 2017 By Diwas Pokhrel
१ मंसीर, काठमाडौं । कर्मचारीहरूमा कम्युनिष्टको सेल हुन्छ र उनीहरूकै पकड हुन्छ । सेना र प्रहरीमा कम्युनिष्टहरू नै हुन्छन् । गुप्तचर संस्थामा कम्युनिष्ट पार्टीको नै संगठन हुन्छ । मजदुर र किसानलाई कम्युनिष्ट व्यवस्था ल्याउनको लागि प्रयोग गरिन्छ । जब कम्युनिष्ट व्यवस्था आउँदछ त्यति बेला उनीहरू सबैभन्दा पीडित हुन्छन् । विश्वको कुनै कम्युनिष्ट देश छ ? जहाँ कम्युनिष्ट व्यवस्था आएपछि त्यहाँ रहेका मजदुर र किसानबाट त्यो देशको नेता बनेको होस् ? छैन । किन ? किनभने मजदुर किसानहरूसँग शक्ति हुँदैन ।
उनीहरूबाट सम्पति लुटिएको हुन्छ । राष्ट्रका नाममा उनीहरुको सम्पत्ति लुटेर उनीहरूलाई दास बनाइन्छ । कम्युनिष्टहरूले कमाउँदछन् । सर्वहाराहरूको हातमा अन्न र कमाई हुँदैन । कम्युनिष्टहरूको हातमा हुन्छ । कम्युनिष्टहरूले तोकेअनुसार मजदुर र किसानले आफूले उत्पादन गरेको सामान पाएका हुन्छन् ।
अन्याय हुन्छ तर बिहान बेलुकाको खानाको लागि पनि कम्युनिष्ट सरकारको भर पर्नुपर्ने हुँदा उनीहरू विरोध गर्न सक्दैनन्। अपवादमा कहिलेकाहिँ विरोध हुन सकेमा पनि त्यसलाई दबाइन्छ । त्यो विरोध पनि ठूलो हिस्साका मजदुर किसानहरू साहसका साथ एक हुन सकेमा र गुप्तचरबाट त्यसभन्दा पहिला बचेमा मात्र सम्भव हुन्छ । आन्दोलन सफल हुन नसके पनि पोल्याण्डमा मजदुर नेता लेख वालेसाले गरेको आन्दोलनले व्यापक रुप लिएकोले उनीसमेतलाई ठूलो कार्यवाही गर्न तात्कालीन कम्युनिष्ट सरकारले सकेन । पछि सोभियत रुसको पतनको शुरुवातकाे कारणले मात्र पोल्याण्डमा पनि लोकतन्त्रको स्थापना हुन सकेको हो ।
राणा शासनको समाप्ति भयो र लोकतन्त्र आयो । फेरि राजाले शासन आफ्नो हातमा लिए । पुनः संघर्षबाट लोकतन्त्रको स्थापना भयो । त्यसपछि माओवाद र हिंसा शुरु भयो । माओवादी हिंसाको आडमा राजाले आफ्नो हातमा शासन लिए र त्यति बेला लोकतन्त्रवादीहरूलाई दुख दिएर कम्युनिष्टहरूलाई बढावा दिंदै आएका राजाहरूमा एउटा नयाँ समीकरणको अवस्थाको सम्भावनाका बारेमा ध्यान गएन । काँग्रेसको विरुद्धमा कम्युनिष्टहरुलाई साथ दिंदै आएका राजाहरु कम्युनिष्टको डरले राजालाई काँग्रेसले सहयोग गर्नेछ र कम्युनिष्टहरूबाट पनि आफ्नो ऋण चुकाउने कार्य हुनेछ, त्यसैले कम्युनिष्टहरूले पनि राजसंस्था नै अन्त्य गर्नेछन् भन्ने विश्वास राजामा थिएन । काँग्रेसलाई खतम गर्न राजा र कम्युनिष्ट मिलेकोमा अब त्यो आवश्यकता कम्युनिष्टलाई रहेन र काँग्रेसलाई पनि सधैं लोकतन्त्रप्रति गिद्धे आखाँ लगाउने राजसंस्थाको आवश्यकता रहने कुरा भएन । माओवादीहरूले राजावादीहरू राष्ट्रवादी छन्, राजासंग अघोषित एकता थियो भन्नु र होलेरीमा राजाले सैनिकलाई माओवादी लडाकुहरूको विरुद्धमा परिचालन हुन नदिनु राजा र कम्युनिष्टहरूका हनिमुनका अन्तिम दिनहरूका संकेत हुन् ।
जेहोस्, नेपालको सन्दर्भमा एउटा तानाशाही चरित्र बोकेको संस्थाको अन्त्य भयो । अर्को तानाशाही चरित्र बोकेको विचार जीवित छ । कम्युनिष्ट व्यवस्थाको तानाशाही कम जनविरोधी छैन । यो कम्युनिष्टहरूको पनि विरोधी छ । तर हामीले एउटा भ्रम पालेका छौं कि जब विरोध हुँदैन त्यति बेला राम्रो हुने संभावना बढी हुन्छ । लोकतन्त्रमा त्यो नियम लागू हुन्छ । जनविरोधी व्यवस्थामा विरोध गर्न दिईदैन र जनताले गल्तिको विरोध गर्न सक्दैनन् । कम्युनिष्ट व्यवस्थाहरूमा त्यही भएको छ वा थियो । त्यसैले जति ठूलो अन्याय भए पनि जनताले विरोध गर्न सक्दैनन् कम्युनिष्ट व्यवस्थामा ।
त्यस्तै, लोकतन्त्रमा पनि अस्तव्यस्तताका उदाहरणहरू छन् । सडक जाम गर्ने, कर्मचारीहरूले जनताको हित होइन आफ्नो तलव र सुविधा मात्र हेर्ने र आन्दोलन गर्ने, राजनीतिमा जनतालाई दुख दिने र खराब मानिसहरूलाई सुरक्षा दिने गरिएको पनि पाइन्छ । यस्ता उदाहरणहरू धेरै छन् । तर त्यहाँ गल्तिलाई गल्ति भन्न नपाइने र एउटा दलले गल्ति गरेमा त्यसको विकल्पमा अर्को दललाई ल्याउन नपाइने हुँदैन । दलले बेइमानी पनि गरेको पाइन्छ तर त्यो बेइमानीलाई कानुनी र संविधानको आधारमा विरोध गर्न नपाइने र विकल्प छान्न नपाइने हुँदैन जुन कम्युनिष्ट ब्यवस्थामा हुन्छ ।
घाँसको मुठो बाँध्दा बन्धन खुकुलो भए पनि काम लाग्दैन र बढी कस्न खोजेमा पनि बन्धन नै चुँडिने संभावना हुन्छ । लोकतन्त्रमा यो नियम लाग्दछ । कुनै दलले बढी नै गल्ति गरेमा जनताबाट चुँडिएजस्तो भएर सत्ताबाट बाहिर जानु पर्दछ र खुकुलो गरेमा जनतालाई गलत तत्वले सास्ती दिन्छन् । लोकतन्त्र नमान्नेहरूले पनि यसको दुरुपयोग गरेको देखिन्छ । हामीले लोकतन्त्रलाई घामको उज्यालो मात्र हो र यसले सबैका राम्रा नराम्रा कुरा देखाउँदछ, त्यही आधारमा जनताले ठीक निर्णय गर्न सक्दछन् भन्ने सोच्न सक्नु पर्दछ । उज्यालोको दुरुपयोग भयो भनेर अँध्यारो रोज्ने हो भने त्यहाँ झन भयावह स्थिति हुन्छ । चोरी, डकैती, खुन रातमा नै बढी भएको सामाजिक अवस्थाले पनि देखाउँदछ । राजनीतिमा एकदलीयता अँध्यारो हो, त्यसको चरित्र समाजमा अँध्यारो रोज्ने हो, त्यसको चरित्र समाजमा अँध्यारोमा हुने अप्ठेरोसँग मिलान गर्न सकिन्छ ।(शोभाकर पराजुली)